उपचार गर्न भन्दै घरबाट लगेका छोराले विष खुवाएर उखुबारीमा फालेर आए
‘सौताको छोरो मुटुको खिल’ यो उखान तुक्का निकै पहिलेदेखि नेपाली जनजीवनमा चल्तीमा छ । आफ्नै श्रीमानकी अर्की श्रीमतीमात्र होइन, उसबाट जन्मेका सन्तानले पनि बेलाबखत दुःख दिन्छ भन्ने भनाइसित मेल खाला यो उखान तुक्काले ।
पछिल्लो समय भने नेपाली समाजमा यसरी ब्याख्या गरिनु राम्रो हुँदैन । कतिका आफैंले जन्माएका सन्तानले पनि अभद्र व्यवहार गरेका सुन्नमा आउँछ त कतिपय व्यक्तिले सौतेनी आमालाई पनि जन्मदिने सरह व्यवहार गरेका छन् । तर बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगर १० बेहरा गाउँमा भने साह्रै क्रूर व्यवहार सौनेती छोराले देखाए ।
केही दिनमात्र अघि हो, उपमहानगर १० बेसरा गाउँकी ६५ वर्षीया प्रभावती मुखिया सहनीले सौतेनी छोराले खुवाएको विषका कारण मृत्यु वरण गरिन् ।
केही वर्षअघि पतिवियोग बेहोरेकी प्रभावतीका आफ्नै सन्तान कोही छैनन् । ३५ वर्षीया सौतेनी छोरा दुखन सहनीले हेरचाह नगरेपछि उनलाई देवर मोटर मुखिया सहनीको रेखदेखमा बस्दै आएकी थिइन् । देवरले नै उनको सुख, दुःख र हेरचाह गर्थे ।
यी एकल महिलाको केही महिनाअघि खुट्टामा घाउ लागेर क्यान्सर पीडित बनिन्  । कसैले उपचारमा चासो नदिएकाले उनको घाउ अरु बल्झिँदै गयो । उपचार गराउने कोही भएन । आफ्नो सम्पतीका नाममा २ कठ्ठा जग्गा भएकी उनलाई बेथाले पिरोल्न थालेपछि वडाध्यक्ष सरोज पटेलसहितले सौतेनी छोरा दुखनलाई औषधि उपचार गर्न दबाब दिए । उपचारका लागि प्रभावतीको नाममा रहेको जग्गा बेच्न पञ्चभलादमीले स्वीकृति दिए ।
दुखनले सौतेनी आमाको जग्गा पनि बेचे । त्यसैबाट आएको २ लाख ६० हजार लिएर घरबाट उपचार गराउन भन्दै कात्तिक २३ गते भरतपुर क्यान्सर अस्पताल जान निस्के । । तर उनी भरतपुर नगई वीरगन्जको अलौस्थित ससुराली पुगे ।
ससुरालीबाट ससुरा ध्रुव सहनीलाई साथ लिएर आमालाई लिएर उनी त्यही दिन भारततिर लागे । मुजफरपुरको सिमरा रेल्वे स्टेसननजिकै लगेर आमालाई ससुराको योजनामा मुसा मार्ने औषधि खुवाएर उखुबारीमा कम्बल ओढाएर घर फर्के  । घरमा उनी किरिया पुत्रीका रुपमा आए । गाउँमा सबैले सोध्न थाले– आमा खोई ?
आमाको मृत्यु भएर उतै दाहसंंस्कार गरेर आएको भन्दै उनी ढाट्दै बसे । गाउँलेले पत्याउन सकेनन् र भन्न थाले, घरमा किन खबर गरिनस् ? उपचार गराएको कागज कहाँ छ ? दुखनको भनाइमा चित्त नबुझेर गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेपछि मात्रै उसले आमालाई विष खुवाएर भारतमै फालेको बतायो ।
उत प्रभावतीलाई भने घाँसीले फेला पारेर मुजफरपुर अस्पताल भर्ना गराएको खोज्न जाँदा थाहा भयो । प्रहरीसहित खोज्न गएकाले फ्यालेको ठाउँमा कम्बलमात्र भेटेका थिए ।
त्यहाँबाट प्रभावतीलाई नेपाल ल्याइयो । ल्याउँदै गर्दा उनी बाटोमै सिकिस्त भएर वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल भनाइ गरियो । तर त्यही दिन उनको मृत्यु भयो । यसरी सौतेनी छोरा दुखनले खुवाएको विषका कारण एउटी आमाको ज्यान गयो ।